Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon’i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2013 12:13 GMT
Mpisera Sina Weibo @假装在纽约 manana ny ambaindainy, na “milaza tena ho any New York,” izay tia manaitaitra amin'ny ankapobeny izay miresaka matetika momba an’ Etazonia ary manana mpanaraka mihoatra ny 470.000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary:
Tao amin'ny kabarim-panombohana tamin'ny 5 mey ny filoha Obama no nilaza, ”Tsy tsimpontsimpom-bahiny isika…samy manana andraikitra manoloana ny hafa amin'ny alalan'ny fananganana idealy sy lalàna ary ny fanolora-tena isika.” Nahazo fampitan-kafatra mihoatra ny 30.000 sy fanehoan-kevitra manakaiky ny 6000 tao anatin'ny roa andro ny hafatra nalefan'i ”Milaza tena ho eto New York”, sy ny dikantenin'ny kabary.
Na dia tsy vao sambany aza ny mpiserasera shinoa no nampitaha ny zavamisy any Shina sy ao Etazonia, dia niteraka adi-hevitra momba ny zo sy adidin'ny vahoaka shinoa indray ny lohahevitra momba ny “maha-olompirenena”. Nilaza ny heviny [zh] i Yin Hong (@尹鸿), zokiolona mpanatanteraky ny Sekolin'ny fanaovan-gazety sy ny fifandraisana Tsinghua:
“Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
Ahitana fitsiriritana, fialonana ary zava-mampalahelo amin'ireo fihetseha-po mivoaka amin'ny fanehoan-kevitra momba kabarin'i Obama. Tafiditra ao anatin'ny resaka ihany koa ny tolona maro, ny fahasarotana maro ary ny fahakiviana atrehin'ny tanora shinoa ankehitriny. Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Nanontany tena ny mpisera “Hula Baopei” (@呼啦啦啦宝宝_佩) :
Tonga eo amin'ny fotoanany mihitsy moa ny tebiteby tahaka izany, raha jerena ny lanonam-panolorana diplaoma saika hita amin'ny faritra maro ao Shina. Angamba ho an'ireo vao nahazo ny diplaoman'ny kolejy farany indrindra teo, ny tsindry mitambesatra an-dry zareo dia tsy hoe ahoana ny fomba hanovana ny firenena, fa ny hoe ahoana no ahafahana miavo-tena ao anatin'izao toe-karena mampalahelo ity. Ny zava-misy, ny taona 2013 no heverina fa fotoan-tsarotra indrindra hitadiavan'asa ho an'i Shina maoderina. Raha mananontanona ny fito tapitrisa ny mpianatry ny kolejy nahazo diplaoma miditra amin'ny tsenan'ny asa, dia sivy tapitrisa ihany ny asa vaovao voaforoona, ary dia tsy maintsy mifaninana amin'ireo mpianatra avy any ivelany, sy ireo nahazo ny diplaoman'ny sekoly ambony sy ny sekolin'ny fifampiraharahana ara-barotra ry zareo amin'izany. Ny tahan'ny mpianatra nahazo ny diplaoman'ny kolejy no heverina ho ambany indrindra eo amin'ny tantara shinoa [zh].
Ny fahatsapana ho olom-pirenena dia mety hidika zavatra mihoatra ny (fananana) fisainana mahaleo tena sy manome hevitra izay samy hafa amin'ny propagandy fanaon'ny governemanta shinoa. Ny zava-dehibe kokoa, maneho ny fahafaha-manao tsindrilenta sy mahaleo tena rehefa miatrika ny fahefam-panjakana izany, fahafaha-manao izay miainga avy amin'ny fahatsapana fa manana anjara toerana eo amin'ny firenena, na dia mety ho olona bitika aza izy. Ary hoy [zh]i Ren Zhiqiang (@任志强), izay mpanankaremben'ny fanana-trano manana mpanaraka mihoatra ny 14 tapitrisa ao amin'ny Weibo,